Ny fanatanterahana ny mpianatra dia ahitana ny fahaizan&#39;ny mpianatra sy ny fandraisana anjaran&#39;ny mpianatra. Ny fepetra ilaina amin&#39;ny fahaizan&#39;ny mpianatra na nifanena na mihoatra ny fenitry ny ambaratonga sy fanantenany amin&#39;ny mpianatra ny mpianatra. Ny fepetra fandraisana anjara ataon&#39;ny mpianatra na nandray anjara sy nahavita ny tombom-panombohan&#39;ny statewide ireo mpianatra. Ny mpianatra izay mandany ny ankamaroan&#39;ny taom-pianarana miditra ao an-tsekoly ihany no tafiditra ao rehefa mitatitra ny fahaizan&#39;ny mpianatra. (Loharanom-baovao: taom-pianarana 2018-2019)
Ahoana no fomba nataon&#39;ireo mpianatra tao amin&#39;ity orinasa ity amin&#39;ny fanombanana ny statewide?
Ny fepetra mahomby amin&#39;ny mpianatra na nifanena na mihoatra ny fenitry ny ambaratonga sy ny fanantenan&#39;ny mpianatra.
Grika 10 (Biolojia)
Salanisan&#39;ny fanjakana 38.6%
Fahaiza-manao siansa Grika 10 (Biolojia)
Ahoana no ampisehoan&#39;ny mpianatra an&#39;ity orinasa ity raha ampitahaina amin&#39;ny kendren&#39;ny fanjakana ho an&#39;ny fahaizana miteny anglisy / fiteny sy matematika?
Ny kendrena interim dia manondro fivoarana isan-taona ilaina amin&#39;ny fanatrarana ny tanjona lavitry ny fanjakana amin&#39;ny fahaiza-manao.
Fepetra fahaiza-manao inona no ananan&#39;ny mpianatra ato amin&#39;ity orinasa ity?
Ny ambaratonga misy teboka maintso dia manondro ny isa mandalo mampiseho ny fahombiazan&#39;ny fenitra ambiny sy ny antenaina amin&#39;ny fahombiazana.
Eo ambany fahaizana
Ambony noho ny fahaizany
Science Science 10 (Biology)
Anglisy / Zavakanto tononkira Grade 10
Inona ny tahan&#39;ny fandraisana anjara ao amin&#39;ity orinasa ity amin&#39;ny fanombanana ny statewide?
Ny fepetra fandraisana anjara ataon&#39;ny mpianatra na nandray anjara sy nahavita ny tombom-panombohan&#39;ny statewide ireo mpianatra.
Fandraisana anjara amin&#39;ny teny anglisy / fiteny
Salanisan&#39;ny fanjakana 97.3%
Fandraisana anjara amin&#39;ny teny anglisy / fiteny Kilonga 10
Ny isan-jaton&#39;ny mpianatra mandray anjara amin&#39;ny fanomban-teny anglisy / fiteny momba ny Zavakanto amin&#39;ny fiteny 10
Fandraisana anjara amin&#39;ny matematika
Salanisan&#39;ny fanjakana 97.5%
Fandraisana anjara amin&#39;ny matematika Kilonga 10
Ny salanisan&#39;ireo mpianatra mandray anjara amin&#39;ny fanombanana matematika alternate ao amin&#39;ny kilasy 10
Fandraisana anjara amin&#39;ny siansa
Salanisan&#39;ny fanjakana 84.4%
Fandraisana anjara amin&#39;ny siansa Grika 10 (Biolojia)
Jereo ny tatitra momba ny fampandehanana isan-taona (APR). https://media.doe.in.gov/apr/2019/f9670-standard.pdf
Mianara bebe kokoa momba ny fahaizan&#39;ny mpianatra amin&#39;ny fanombanam-pirenena momba ny fivoaran&#39;ny fampianarana. https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
Mianara bebe kokoa momba ireo mpianatra précitation any Indiana. http://www.elacindiana.org/data/elac-annual-report-interactive-dashboard/